आज आइतबार, कसरी रिझाउने सुर्य देवलाई ? – Suchana Hub
आज आइतबार, कसरी रिझाउने सुर्य देवलाई ?
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा हप्ताको हरेक बारलाई कुनै न कुनै देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको हरेक दिन बारअनुसार कुनै न कुनै देवी–देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्।
हप्ताको पहिलो दिन आइतबार भगवान सूर्य देवताको दिन हो । आइतबार सूर्य देवताको मन्त्र जप तथा पूजाको विशेष महत्व रहेको हुन्छ । साथै काशीको कोतवाला भैरवको प्रिय दिन पनि आइतबार हो। हिन्दु धर्ममा आइतबारलाई ‘सूर्य देव‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मिसाउनुहुँदैन। व्रत बस्नेहरूले रातो वस्त्र लगाउँदा सूर्यदेव प्रसन्न हुने मान्यता रहेको छ भने पुजा गर्दा रातो रङ्गको फूल चढाउनुपर्दछ।
Tags: #ताजा समाचार, #भगवान
Previous भगवान श्रीगणेशको यस्तो स्वरूप जसले मानवलाई अनेकौँ किसिमको ज्ञान दिन्छ
Next आज बडादशैंको तेस्रो दिनः देवी चन्द्रघण्टाको पूजाआराधना गरी मनाइँदै
धन्तेरस २०७७ : यी राशीले यस्तो सामान किन्दा चम्किन्छ भाग्य